Faahfaahinta kulamadii Group B (Wararkii ugu dambeeyey EURO 2012)+SAWIRO – SBC
Faahfaahinta kulamadii Group B (Wararkii ugu dambeeyey EURO 2012)+SAWIRO
Kulamo xiiso leh oo ka tirsan group B oo qayb ka ah horyaalka qaarada Yurub ee EURO 212 ayaa shaley la ciyaaray kuwaasi oo ahaa kuwa xiiso badan oo dhexmarey group-ka B oo ah group-ka dhimashada.
Portugal oo rajo ka soo gashay EURO 2012 & Ronaldo oo taageerashiisa ku hor kufay
Xulka Portugal ayaa fara cidiyo leh uga baxdey dhigiisa wadanka Denmark oo shaley ciyaar aad u xiiso ku dhexmarey garoonka Lviv Arena ee dalka Ukarine, kulan qayb ka ahaa kooxda B kaasi oo si weyn la isagu jilbo murxay.
Xidiga Képler Laveran Lima Ferreira (Pepe) ee asalkiisu yahay Brazil kana tirsan kooxda Real Madrid ayaa fursad dahabi oo uu helay kubad koorno loo soo qaaday ayuu madaxa la helay isagoo ruxay shabaqa Demark, waxaana halkaasi ku bilowdey rajadii Portugal ay ka qabatey inay ku sii negaato koobka UERO 20120.
12 daqiiqo ka dib goolkaasi Pepe dhaliyey weeraryahanka Helder Postiga ayaa lugta si xoog leh ugu sii qaaday kubad caaqibo leh oo uu soo taagey ciyaarayahanka Manchester United ka tirsan isagoo u suurtagalin waayey goolhayaha Denmark Stephan Maigaard Andersen in uu kubadaasi badbaadiyo.
Denmark oo ku naaloonaysay guushii ay ka soo gaartey todobaadkii hore xulka Holand kuma niyad jabin labadaasi gool ee deg deg ah ee laga dhaliyey 36-dii daqiiqo ee ugu dambeysay ciyaarta, 4 daqiiqo iyadoo ay ka dhiman tahay dhamaadka ciyaarta xidiga ifiya ee Denmark kana tirsan kooxda Arsenal ayaa kubad baas baas aheyd oo ku dambeysay baas madaxa ah wuxuu si fudud oo xarago leh ugu hubsadey shabaqa Portiqiiska oo xiligaasi banaan, isagoo ciyaarta ka dhigay 2-1.
Xulka Portiqiiska neefta ayaa ku dhegtey waxaana ay niyeysteen in xaaladu xun tahay oo ay dhici karto in laga soo bareejiyo goolka ay ku hogaaminayso ciyaarta, waxaase taageerayaasha Portugal candhuufta dhib u liqeen markii weeraryahankooda ay ku dhaartaan Cristiano Ronaldo uu dayacay ama dhalin waayey kubado dahabi ah oo loo soo taagey iyadoo arintaasi walaac ku abuurtey ciyaartoyda Portugal.
Dayacaasi xooga leh ka dib Nickals Bendtner ayaa daqiiqadii 81-aad goolkiisii hore ku labeeyey kubad kale oo madaxa uu ku taabtey, isagoo ciyaarta ka dhigay 2-2, waxaana aamusnaan ka soo hartey taageerayashii Portugal oo guusha kulanka isa siinayey.
Portugal oo ku xisaabtamaysey in barbardhacaasi uu yahay rajo beel waxay qaadeen dadaal kasta oo ku aadan sidii ay ciyaarta ugu guuleysan lahaayeen, iyadoo tababare Paulo Jorge Gomes Bento oo todobaadka dambe 43 sano jir ay u buuxsamayso da’diisu ciyaarta badal ku soo galiyey daqiiqadii 84-aad ciyaaryahan Silvestre Varela ee asalkiisu ka soo jeedo Jamhuuriyada Cape Verde ee dhacda badweynta Atlantic-ga.
3 daqiiqo iyadoo ay ka dhimantahay waqtigii loogu tala galay dhamaadka ciyaarta ayaa Silvestre Varela wuxuu ka dhexhelay soohdinta goosha Denmark kubad isagoo kubadaasi uu si xarago leh shabaqa u dhexgaliyey, waxaana uu halkaasi ku asturay ceebtii Ronalado oo ee dayaca faraha badan taasi oo gaartey in garoonka uu dhan uu ku qayliyo magaca ciyaarayahanka reer Barcelona Messi oo si weyn u xifaaltamaan Ronaldo.
Portugal waxay la ciyaari doonaan Natherland oo labadii kulan ee hore laga soo badiyey, halka Denmark ay fooda dari doonto xulka Germany oo labadii kulan soo badiyey isla markaana groupkan ku hogaaminaya lix dhibcood.
Porugal waxay kaga jirtaa liiska FIFA ee kooxaha ugu wanaagsan ciyaarta kubada cagta kaalinta 10-aad, halka Denmark ay ku jirto kaalinta 9-aad.
Xidiga Bayern Munich Mario Gomez ayaa laba goo loo uu saxiixay xulkiisa Germany waxay ku reebtey rajo xumo xulka Holand oo kulankoodii labaad oo xiriir oo qayb ka ah kulamada EURO 2012.
Gomas daqiiqadihii 24-aad & 38-aad ayuu siiyey xulkiisa hogaanka ciyaarta waxaana naadiga orange ee reer Holand ay isku dayeen sidii ay u soo celin lahaayeen rajadoodii koobkan, balse ciidamada tababare Joachim Loew oo aad uga dhisnaa dhexda iyo difaaca ayaa u diiday weeraryahanada reer Holand in kubada ay sii hayaan ama ay weerar geysteen, inkastoo fursado dhawr ah ay dayaceen ciyaaryahano ay ka mid yihin Roben Van Persie, Arjay Roben, Wesley Sneider & Rafeal van Der.
Laakiin daqiiqadii 73-aad weeraryahanka reer Arsenal Van Persie ayaa siiyey wax uun rajo ah xulkiisa ka dib markii uu kubad uu la dhexmarey daafaca Jarmalka uu dhex dhigay shabaqa isagoo ciyaarta ka dhigay 2-1 oo ay Germany ku hogaaminayso.
Isku day kasta oo ay reer Holand sameeyeen oo ay ku damacsanaayeen in kulanka ay barbar dhac ka dhigaan way ay noqon wayday, iyadoo natiijadii noqotey 2-1, iyadoo sidaasi ay ku yar tahay rajada Netherland.
Holand rajada uga harsan koobkan ee ah inay u gudubto wareega 8-da waa iyadoo Portugal kaga badisa laba gool oo nadiif ah, isla markaana Jarmalku garaaco Denmark sidaasi oo ay ugu soo bixi karto faqri xaga goolasha ah oo ay Portugal uga sare marto.
Germany wuxuu ku hari karaa iyadoo Denmark ka badiso isla markaana Portugal ka badiso sidaasi oo ay ku soo baxayaan Danish-ka iyo Bortiqiiska iyadoo faqri xaga goolasha ah la eegi doono.
Holand taariikhda waligeed koobka aduunka & koobka EURO-da ma aanay dhicin in qaybta hore laba gool lagu hogaamiyo iyadoon wax laheyn.